Ankizy sarotra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Ankizy iray sarotra
Taona am-polony maro lasa izay dia nandinika ny psikolojia ankizy ho toy ny ampahany amin'ny diplaoma amin'ny fitaizana. Ao amin'ny fandinihana iray, ny ankizy mikorontana manana olana isan-karazany dia noheverina ny fomba hitsaboana azy ireo. Tamin'izany fotoana izany dia nantsoina hoe "zaza sarotra" izy ireo. Ankehitriny dia tsy ekena intsony io teny io eo amin'ny tontolon'ny mpampianatra sy ny psikolojia.
Amin'ny vavaka dia matetika aho no mandinika ny ratsy nataoko sy ny eritreritro ary hitako fa ilaina ny miala tsiny amin'ny Mpamorona ahy. Vao tsy ela akory izay, rehefa diso fanantenana tamin’ny tenako aho tamin’ny vavaka, dia niantso ny Raiko any an-danitra aho hoe: “Zanaka sarotra be aho!” Hitako fa olona tafintohina sy lavo foana ny tenako. Toy izany koa ve no fahitan’Andriamanitra ahy? « Fa Jehovah Andriamanitrao no momba anao, Mpamonjy mahery. Ho faly anareo sy hamindra fo aminareo Izy, hamela ny helokareo amin’ny fitiavany, ary ho faly aminareo amin’ny firavoravoana” (Zefania). 3,17).
Andriamanitra dia tsy miova ary tsy miova. Raha tezitra amiko izy dia ho vitako. Izany no mendrika ahy, fa izany ve no fiheveran’Andriamanitra ahy? Hoy ny mpanao salamo: “Miderà an’Andriamanitry ny lanitra, fa mandrakizay ny fahatsarany.” ( Salamo 13 ).6,26). Tokony ho velom-pankasitrahana isika fa tia antsika tsy an-kijanona Andriamanitra, izay manana ny maha izy azy ny fitiavana. Halany ny fahotantsika. Amin’ny fitiavany sy ny fahasoavany tsy manam-petra, dia omen’Andriamanitra antsika, zanany “sarotra” ny famelan-keloka sy ny fanavotana: “Tamin’ireo no nananantsika ny fiainantsika taloha tamin’ny filan’ny nofontsika sy nanao ny sitrapon’ny nofo sy ny saina ary zanaky ny fahatezerana. araka ny natiora tahaka ny hafa. Fa Andriamanitra, Izay manan-karena amin'ny famindram-po, amin'ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy koa, izay efa maty tamin'ny ota - fa ny fahasoavana no namonjena anareo - ary niara-nitsangana tamintsika tamintsika Izy, ary tafatoetra ao amin'i Kristy any an-danitra. Jesosy » (Efes 2,4- iray).
Manana drafitra mahafinaritra ho anao Andriamanitra: “Fa fantatro tsara izay iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy alahelo, mba homeko anareo ny ho avy sy ny fanantenana.” ( Jeremia 2.9,11).
Ny olanao sy ny toe-javatra iainanao dia mety ho sarotra, fa tsy anao amin'ny maha-olona anao.